Ụdị SEO kachasị njọ na 2017: Nghọta site na Ọkụ
Na 2017, usoro nyochacha njirimara nke ọhụrụ achọpụtara. Mgbanwe a na - esoteọkwa nke ọhụrụ algorithm njirisi Google mepụtara. Ụkpụrụ ahụ na-eme ka akụkụ SEO dị arọ dị ka ọdịnaya ọdịnaya naMmetụta dị ka nke ọma dị ka ihe omume enyi na enyi. N'otu oge ahụ, usoro ochie dịka nri nri na-eri ihe dị ka nwa ojiingwaọrụ, nke na-akpata ntaramahụhụ.
Nik Chaykovskiy, ọkachamara nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-enye ụfọdụ SEO echiche, nke nwere ike ime ka gị na ebe nrụọrụ weebụ n'usoro ngwa ngwa n'afọ a - sun palace casino coupon.
1. Na-atụ Anya Ka E Ji Nwee Mmasị Na Mberede
Google na-egosi ebe nrụọrụ weebụ enyi na enyi. N'afọ iri abụọ gara aga,ekwe ntị na-eji nwayọọ nwayọọ dochie kọmpụta na ịntanetị. Kemgbe 2015, Google mara ọkwa na ebe nrụọrụ weebụ enyi na enyiga-abụ njirisi maka Google ịkwado weebụsaịtị. Ọzọkwa, weebụsaịtị ndị na-enweghị ndị enyi na-eji agagharị agagharị na-anatantaramahụhụ nke ịdaba ọkwa. Google emeela ka o doo anya na n'oge na-adịghị anya, ọ ga-ekewaa ntinye aha nke weebụsaịtị na ebe nrụọrụ weebụ. Makaihe kpatara ya, onye na-ewu weebụsaịtị ga-eme ka ha nwee mkparịta ụka enyi na enyi, na-ebuli nyocha ọchụchọ na imelite nzaghachisaịtị ahụ. Ntughari mkpanaka ga-eme ka ebe nrụọrụ weebụ dị elu dị elu.
2. Na-atụ Anya Nwunye Ebe Ọzọ Iji Wepụta Mmetụta Mpempe akwụkwọ (AMPs)
Ebe ọ bụ na 2015, AMP anọwo na-emekarị mgbe ọ na-abịa n'ịdị elu ibe weebụmaka ihe nchọgharị mkpanaka. Ebe ọ bụ na ụzọ nke enyi na enyi na-ebute ụzọ, AMP bụ otu n'ime ụzọ iji hụ na website nwere UEO..AMPs na-ebu ibu ugboro ise ngwa ngwa n'otu oge ahụ, na-edebe data iji ruo ugboro 8 n'ụzọ nkịtị ka weebụsaịtị na-eri.
3. Ihe dị mkpa nke ọkachamara na ọkachamara (UEO) ga-eto
Ntuziaka Google na ndị na-ere ahịa n'Ịntanet na ndị na-ewu ụlọ na ebe nrụọrụ weebụ iji tinyekwuo mmesi ikena-ewu ewu weebụsaịtị. Google na-adabere n'ihe ndị dị ka mfe, ịdị mfe nke iji, igodo na ịnweta. A saịtị kwesịrị inyeonye ọrụ ahụ bụ ezigbo ahụmịhe nchọgharị maka ya ibute ụzọ na engines ọchụchọ.
4. Search Voice Na Na Na
Nchọgharị olu na-ewere dịka otu n'ime ụzọ maka nyocha ọchụchọ.Software dị ka Siri, Cortana na Google Ugbu a na-eji iwu olu iji tinye ajụjụ ọchụchọ na nyocha ọchụchọ. Ndị mmepe weebụ kwesịrị ịkwadobanye n'ọhịa ọhụrụ a karịsịa site na ịrị elu ngwaọrụ site na iji ịntanetị dị ka smart TV si.
5. Ọdịnaya Dị Ugbu a Na-achọ Nchọgharị-Tụkwasị
SEO etinyewo nyocha nke okwu ntinye. Otú ọ dị, Google nyochaa ugbu a.Google ga-ebuli ọdịnaya nke nwere mmasị dị ukwuu n'etiti ndị na-ege ntị. Ngalaba ndị dị ka ọnụego bounce, oge aka na ibe garaga-abụ ụfọdụ n'ime ihe ndị dị elu n'ọkwá dị elu karịa akwụkwọ Google results search results (SERPs).
Dị ka dijitalụ marketer, onye kwesịrị ịnọ na-amụ anya ma dị njikere ịnọgide na yamgbanwe. Maka afọ a, ọtụtụ ntinye ka ọtụtụ ntanetị chọọ. Site na AMP gbanwere na mobile-mbụ SEO. Mgbanwe ndị aemeela ọtụtụ ihe iji gbanwee usoro nyocha ọchụchọ omenala. N'ịgbaso ndụmọdụ ndị e kwuru n'elu, mmadụ nwere ike ịdị njikere makamgbanwe ndị na-enweta na ịnweta ọkwa dị mma na engines ọchụchọ.